News 18 Nepal || फाइजर खोप किन्न सरकारले गर्‍यो ‘गोप्य सम्झौता’, कहिले आइपुग्ला खोप ?
बीबीसी । अमेरिकासहित विभिन्न देशमा कोभिडविरुद्ध प्रयोग गरिएको फाइजर खोप खरिदका लागि नेपालले ‘नन-डिस्क्लोजर अग्रीमन्ट’मा हस्ताक्षर गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धका सबै खोप प्राप्तिका लागि पहल गरेको अवस्थामा फाइजरसँग पनि “एक तहको समझदारी भइसकेको” र उक्त खोप खरिद गर्नका लागि “स्रोतको पनि जोहो भइसकेको” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।
अमेरिकासहित केही मुलुकमा फाइजर-बायोएनटेकले विकास गरेको खोप १२ वर्षमाथिका उमेर समूहमा पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नेपालमा पनि सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई उक्त खोप दिने लक्ष्य राखेको अर्यालले जानकारी दिए ।
सरकारले बालबालिकाको सङ्ख्याका आधारमा ६० लाख फाइजर खोप प्राप्तिका लागि पहल अघि बढाइएको बताइएको छ । त्यसबाहेक कोभ्याक्स सुविधामार्फत् थप ४० लाख मात्रा फाइजर खोप नेपालमा ल्याउने तयारी भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
“‘हामीले खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । उहाँहरूसँग वार्ता गरिरहेका छौँ,” अर्यालले भने । अहिलेसम्म नेपालमा कोभिशील्ड, भेरो सेल र जोनसन एन्ड जोनसन खोप प्रयोगमा ल्याइएको छ । जोनसन एन्ड जोनसन खोप एक मात्रा दिए पुग्छ भने अरू खोप दुई मात्रा दिनुपर्छ ।
खोप किन्ने स्रोतको जोहो कसरी ?
अर्यालका अनुसार सरकारले फाइजर खोपको उत्पादक फाइजर-बायोएनटेकसँग एउटा “गोप्य सम्झौता” गरिसकेको छ । “अब बल्ल सङ्ख्या र मूल्यमा मध्यस्थता गर्ने हो,” उनले भने ।
“त्यसपछि पूर्वाधार बनाउनु पर्ने कुरा हुन्छ । समय लाग्छ । हामीले भविष्यको कुरा पनि सोचेका हौँ ।” फाइजरसँग खोप खरिद गर्नका लागि विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्कको ऋण र अनुदान सहयोग परिचालन गरिने तय भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी आवश्यकताअनुसार विश्व ब्याङ्क वा एशियाली विकास ब्याङ्कबाट अथवा दुवैबाट रकम प्राप्त हुने स्रोत परिचालन गरिने गरी तयारी अघि बढाइएको बताउँछन् । कोभ्याक्समार्फत् ल्याइने भनिएको खोप पनि नेपालले खरिद गर्ने अर्यालले जानकारी दिए । “कोभ्याक्सको अलि सस्तो हुन्छ । सीधा खरिद अलि महँगो हुन्छ,” उनले थपे ।
भण्डारण र वितरणमा कस्ता चुनौती ?
हालसम्म विकास भएका कोभिड खोपमा भण्डारण र वितरणका हिसाबले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण खोप फाइजरको रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । फाइजर खोपलाई निकै कम तापक्रममा राखेर ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई खोप प्रयोगमा एउटा अवरोधका रूपमा लिइएको थियो ।
सुरुमा उक्त खोपलाई माइनस ८० देखि माइनस ६० डिग्री सेल्सीअसमा भण्डारण गर्नुपर्ने आवश्यक ठानिएको थियो । तर गत फेब्रुअरीमा अमेरिकाले यस खोपको भण्डारण र पारवहनको मापदण्डलाई सुधारेर माइनस १५ देखि माइनस २५ डिग्री सेल्सीअसमा फ्रिजमा दुई सातासम्म राख्न सकिने व्यवस्था स्वीकृत गरेको थियो ।
तर त्यस्तो पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नेपालले भण्डारण नगरी छिटो छिटो खोप लगाउने नीति लिएको अधिकारी बताउँछन् । “भण्डारण गर्ने धेरै क्षमता नभए पनि केहीकेही हामीसँग छ,” उनले भने ।
कोभिडको दोस्रो लहरमा “गाह्रो स्थिति उत्पन्न भएको” र तेस्रो लहरको पनि “निकै धेरै सम्भावना रहेको” अवस्थामा खोप प्राप्तिका सन्दर्भमा ध्यान केन्द्रित गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
कस्तो पूर्वाधार थपिँदैछ ?
कोरोना भाइरसविरुद्ध लगाइने खोपमध्ये हालसम्म नेपालमा प्रयोग गरिएका तीनवटै खोप २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा राख्न मिल्छ । विश्वबजारमा विभिन्न तापक्रममा राख्न मिल्ने खोप उपलब्ध भइरहेका बेला नेपालमा पनि माइनस २५ देखि ३० डिग्री तापक्रम सम्ममा राख्न सकिने खोप भण्डारको निर्माण गर्न लागिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।
अहिले पोलियो खोप राख्नका लागि केन्द्रमा मात्रै त्यस्तो भण्डार रहेको र अब त्यस्तो भौतिक संरचना जिल्लासम्म निर्माण गरिने अधिकारीहरू बताउँछन् । “हामीले माइनस २५ देखि ३० डिग्रीका लागि विस्तारको काम अघि बढाएका छौँ । त्यसले चाहिँ मोडेर्नासम्मका लागि गर्न सकिन्छ ।
खरिद भएर सामान आउँदैछ,” विभागको खोप व्यवस्थापन समेत हेर्ने परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले भने । “माइनस २५ डिग्रीको खोप नेपालले पाउने भनेको पनि २०२१ को अन्त्य वा २०२२ को सुरुमा हो । त्यस बेलासम्ममा व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्छ ।”
फाइजरजस्तो खोप खेपखेपमा आपूर्ति गर्न सके एक महिनाभित्रमा ४० लाखसम्म खोप प्रयोग गर्न बाधा नपुग्ने उनले जानकारी दिए । सरकारले भण्डारणसँगै खोप ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने नौवटा गाडी पनि खरिद गर्न लागेको जनाएको छ । तीमध्ये दुई वटा सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा र अन्य सात वटा प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक वटाको दरले राखिने योजना छ ।